कोरोना महामारी अहिले नै सकिने सम्भावना छैन : डब्लुएचओ - सुनाखरी न्युज
कोरोना महामारी अहिले नै सकिने सम्भावना छैन : डब्लुएचओ
Posted on: January 19, 2022 - 2:17 pm
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का महानिर्देशक डा. टेडरोज आध्यनोमले कोरोना भाइरसको महामारी निकट भविष्यमा अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन् । उनले विश्वका नेताहरुलाई चेतावनी दिँदै महामारी अहिले नै सकिने सम्भावना नरहेको भन्दै सक्रिय भएर महामारीविरुद्ध लाग्न आग्रह गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै, उनले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनले तुलनात्मक रुपमा गम्भीर बिरामी बनाउने सम्भावना कम देखिनुलाई भाइरसमाथिको जीतका रुपमा बुझ्न नहुने पनि बताएका छन् । पछिल्लो समय युरोपका विभिन्न देशमा ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिइरहेका छन् । मंगलबार मात्रै फ्रान्समा करिब पाँच लाख नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
डब्लुएचओको जेनेभास्थित हेडक्वार्टरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा डा. टेडरोजले महामारी नियन्त्रण लिनका लागि सावधानी अपनाउनेसँगै खोप अभियानलाई तीव्र पार्नुपर्ने र धनी देशले खोप नपाएका गरिब देशलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ओमिक्रोनका कारण अस्पताल भर्ना हुने र कतिपय अवस्थामा मृत्यु पनि हुने गरेकाले कुनै पनि गल्ती नगर्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तै, ओमिक्रोन भेरियन्ट अहिले तीव्र गतिमा फैलिरहँदा नयाँ भेरियन्ट आउन सक्ने चेतावनी पनि डब्लुएचओ प्रमुखले दिएका छन् ।